माघ २५, २०७४ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ:- बलिउड अभिनेता अभिषेक बच्चनको ट्वीटर अकाउन्ट बुधबार पाकिस्तान समर्थक टर्कीका साइबर आर्मी ‘अयिल्दिज टिम’ ले ह्याक गरेका छन्। यो भन्दा पहिले वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेरको ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक गरेका थिए। अकाउन्ट ह्याक भएपछि उनको कभर फोटोमा एक मिसाइल रहेको छ र जसमा सांकेतिक रुपमा ‘अयिल्दिज टिम’ लेखिएको छ।
यसको साथ-साथै उनको अकाउन्टमा टर्कीको भाषा र अंग्रेजी भाषामा ट्वीट शेयर गरिएको थियो। त्यसमा टर्कीको झण्डाको विशेष प्रतिक पनि छ। यस समूहले मंगलबार अनुपम खेरको अलावा गभर्नर किरण बेदी, भाजपाका महासचिव राम माधव र राज्यसभा सदस्य स्वप्न दासगुप्ताको पनि ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक गरेका थिए।
अनुपम खेरका ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक:
पाकिस्तानी समर्थक ह्याकरले अचानक अनुपम खेरको निन्द्रा ब्युझाईदिएको थियो। वास्तवमा पाकिस्तानी ह्याकर्सले अनुपम खेरका ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक गरेका थिए। उक्त कुरा उनी स्वयमलाई थाहा थिएन। उनले आफ्नो ट्वीटर ह्याक भएको कुरा आफ्नो मित्रको माध्यमबाट थाहा पाएका थिए। यसपछि ट्वीटरले उनको अकाउन्ट केही समयका लागि सस्पेन्ड गरेका थिए। अनुपम खेर त्यस समयमा लस एन्जलसमा थिए। एएनआईसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मेरो ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक भएको जानकारी मेरो साथीले दिएका थिए, त्यसबेला त्यहाँ बिहानको एक बजेको थियो।’ एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित : बिहिबार, माघ २५, २०७४१८:४७
हिउँ र कुहिरोले ढाकियो सुकेटार विमानस्थल ! शव काठमाडौँ ल्याउन कठिन ![तस्विर सहित]
अब अनधिकृत कर बढाउने स्थानीय निकायलाई कारवाही गरिने !
“आदिवासी जनजातिका एजेण्डामा बौद्धिक बहस हुनुपर्छ”
हिजो साँझ सुन्धारामा युवक माथि गोलि चलाइयो ! किन प्रहरीले राख्यो गुपचुप ?